ဆည်မြောင်းသည်မိုးရေချိန်မကျေနပ်သောရေလိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းရန်လူလုပ်စနစ်များမှတစ်ဆင့်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အသုံးပြုရန်ရေကိုထိန်းချုပ်ထားသော application ဖြစ်သည်. ကမ္ဘာပေါ်တွင်အစဉ်အဆက်တိုးတက်နေသောလူ ဦး ရေအလုံအလောက်ရရှိစေရန်သီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်းသည်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်အရေးပါသည်. ယနေ့လယ်သမားများအသုံးပြုသည့်ဆည်မြောင်းနည်းစနစ်များစွာရှိသည်, ဆည်မြောင်းအတွက်ရေကိုပိုမိုထိရောက်သောနည်းလမ်းများရှာဖွေရန်အမြဲတမ်းလိုအပ်သည်.
လယ်ကွင်းများတွင်ရေလောင်းခြင်းသည်ယနေ့ခေတ်တွင်ဆည်မြောင်းနည်းလမ်းဖြစ်သော်လည်းအခြားတစ်ခုဖြစ်သည်, ပိုမိုထိရောက်နှင့်စက်မှုလယ်ယာနည်းလမ်းများလည်းအသုံးပြုကြသည်. လူကြိုက်အများဆုံးစက်မှုလယ်ယာနည်းစနစ်များထဲမှတစ်ခုမှာရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပိုက်ရေနံဆည်မြောင်းစနစ်ဖြစ်သည် , ရေမှုန်ရေမွှားပုံစံကိုဖွဲ့စည်းရန်သကဲ့သို့ဖိအားအောက်မှာ operated perforated ပိုက်သို့မဟုတ် nozzle အားဖွငျ့အသုံးပြုသည် . အရာစက်ဝိုင်းfieldsရိယာလယ်ကွင်းရေလောင်းဖို့ရွေ့လျားမှုန်ရေမွှားသေနတ်များကိုအသုံးပြုသည်.